ဘာပွောစရာရှိလို့လဲ တဲ့…. – Shinyoon
December 28, 2020 by Shin Yoon
စကားလေးတဈခှနျးပဲ … သာမနျအခြိနျတှမှော ဘာမှဖွဈမသှားနိုငျပမေယျ့ တကယျသိပျလှမျးနလေို့ ဖုနျးဆကျတဲ့အခါ ဘာပွောစရာရှိလို့လဲဆိုတဲ့ စကားတှနေောကျမှာ ပွောမယျလို့ကွံရှယျထားတာတှအေားလုံး ပြောကျသှားခဲ့ဖူးတယျ …
ဟငျ့အငျး ဘာမှမဖွဈပါဘူးပေါ့ ဒီတိုငျးလေးပဲ ဆကျဖွဈလိုကျရုံပါ အသံကွားလိုကျရပွီပဲ အဆငျပွနေပွေီဆိုတာသိရုံနဲ့တငျ ဖုနျးခလြိုကျဖို့လုံလောကျပွီလေ ဆကျပွောစရာ စကားလုံးတှရှေိပမေယျ့လဲ ဆကျပွောနိုငျမယျ့အငျအားတှေ မဲ့သှားအခါ အလိုလို လကျက ဖုနျးခပြွီးသားဖွဈသှားတယျ
မြှျောနမေယျထငျတယျဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ ကိုယျက မိုကျရူးရဲဆနျနမေိတာ … အဆငျပွပေါ့မလားဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ စိတျပူနခေဲ့မိတာ သူက ပြျောအောငျ နတေတျတယျ ကိုယျပဲ ပြျောအောငျမနတေတျခဲ့သေးတာလေ … ခဈြသူနှဈဦးမှာ ပွောစရာတှေ ဘာမှမရှိဘူးတဲ့လား
ကိုယျ့ဘကျက စပွီးပွောမှ ဝတျကတြေမျးကပြွေောလာမယျ့ စကားတှကေို နားထောငျနိုငျဖို့အငျအားတှလေဲ တဖွေးဖွေး မဲ့မဲ့လာပါပွီ … သူ့မှာ ဘာမှ ပွောစရာရှိမနမှေနျး အရငျကတညျးက သိမနခေဲ့တာကိုက ကိုယျ ညံ့ခဲ့တာလို့လဲ ဖွပေါမယျ … တကယျ လိုအပျလိမျ့မယျလို့ထငျခဲ့တာ
ဘာပွောစရာရှိလို့လဲ တဲ့ … စကားလုံးလေးတဈလုံးပဲ သိပျလှမျးလို့ဆကျမိတဲ့ကိုယျ့အတှကျတော့ ဘာမှဆကျမပွောနိုငျတော့အောငျ ဆှံ့အသှားမိတယျ … စကားလုံးလေး တဈလုံးပါပဲ အကွောငျးအရာတှမေရှိလဲ အသံလေးကွားခငျြတဲ့ကိုယျ့အတှကျတော့ သိပျအခံရခကျတယျ …ဘာပွောစရာရှိလို့လဲ တဲ့….
စကားလေးတစ်ခွန်းပဲ … သာမန်အချိန်တွေမှာ ဘာမှဖြစ်မသွားနိုင်ပေမယ့် တကယ်သိပ်လွမ်းနေလို့ ဖုန်းဆက်တဲ့အခါ ဘာပြောစရာရှိလို့လဲဆိုတဲ့ စကားတွေနောက်မှာ ပြောမယ်လို့ကြံရွယ်ထားတာတွေအားလုံး ပျောက်သွားခဲ့ဖူးတယ် …
ဟင့်အင်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပေါ့ ဒီတိုင်းလေးပဲ ဆက်ဖြစ်လိုက်ရုံပါ အသံကြားလိုက်ရပြီပဲ အဆင်ပြေနေပြီဆိုတာသိရုံနဲ့တင် ဖုန်းချလိုိက်ဖို့လုံလောက်ပြီလေ ဆက်ပြောစရာ စကားလုံးတွေရှိပေမယ့်လဲ ဆက်ပြောနိုင်မယ့်အင်အားတွေ မဲ့သွားအခါ အလိုလို လက်က ဖုန်းချပြီးသားဖြစ်သွားတယ်
မျှော်နေမယ်ထင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကိုယ်က မိုက်ရူးရဲဆန်နေမိတာ … အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ စိတ်ပူနေခဲ့မိတာ သူက ပျော်အောင် နေတတ်တယ် ကိုယ်ပဲ ပျော်အောင်မနေတတ်ခဲ့သေးတာလေ … ချစ်သူနှစ်ဦးမှာ ပြောစရာတွေ ဘာမှမရှိဘူးတဲ့လား
ကိုယ့်ဘက်က စပြီးပြောမှ ၀တ်ကျေတမ်းကျေပြောလာမယ့် စကားတွေကို နားထောင်နိုင်ဖို့အင်အားတွေလဲ တဖြေးဖြေး မဲ့မဲ့လာပါပြီ … သူ့မှာ ဘာမှ ပြောစရာရှိမနေမှန်း အရင်ကတည်းက သိမနေခဲ့တာကိုက ကိုယ် ညံ့ခဲ့တာလို့လဲ ဖြေပါမယ် … တကယ် လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာ
ဘာပြောစရာရှိလို့လဲ တဲ့ … စကားလုံးလေးတစ်လုံးပဲ သိပ်လွမ်းလို့ဆက်မိတဲ့ကိုယ့်အတွက်တော့ ဘာမှဆက်မပြောနိုင်တော့အောင် ဆွံ့အသွားမိတယ် … စကားလုံးလေး တစ်လုံးပါပဲ အကြောင်းအရာတွေမရှိလဲ အသံလေးကြားချင်တဲ့ကိုယ့်အတွက်တော့ သိပ်အခံရခက်တယ် …
တဖွေးဖွေး နှလုံးသားတှေ အေးစကျလာတယျ
ခဈြခွငျး မုနျးခွငျးတှကေို စိတျကုနျလာရုံပဲရှိတာပါ